Manararaotra ny Internet Analytics | Martech Zone
Betsaka ny olona mijery ny fananganana tranokala mahazatra ary mahita tranokala manondro antso ho amin'ny asa izy ireo ary avy eo mandrefy izany Call to Action amin'ny alàlan'ny Analytics, miantso azy io hoe fiovam-po. Raha hanintona an'io ianao dia toa izao:
Ny olana, mazava ho azy, ny Web Analytics dia mametraka TONS firavaka data miafina izay tsy misy mihaino na manararaotra. Matetika, ny Analytics dia ampiasaina mba handrefesana ny loharano, ny fikarohana, ny tsindry ary ny fiovam-po. Amin'ny fampiasana ireo tatitra ireo, ny matihanina amin'ny marketing dia manao fanitsiana sy famantaranandro hijerena izay mitranga ao amin'ireo tatitra. Ity tsingerin'ny fanantenana ity (antenainao fa misy zavatra miova) dia miverimberina.
Ny paradigma amin'ny fijerena ny Analytics fotsiny ho toy ny interface interface dia tsy maintsy miova. Ny Analytics dia tsy sehatra fanaovana tatitra fotsiny, fa fitehirizam-bola ho an'ny mpitsidika. Raha ampiasaina amin'ny fahaiza-manao, azonao atao ny mampifangaro ny atin'ny tranokalanao amin'ny Analytics angona mba hanomezana mavitrika ny atiny hitodihana tsara kokoa amin'ireo mpitsidika anao.
Ohatra sasantsasany amin'ny fampidirana tranonkala Analytics
Manana mpitsidika 2 ao amin'ny tranokalanao izay arahin'ilay rindranasan'ny Analytics ianao. Ny mpitsidika iray dia mitsidika ny tranokalanao avy amin'ny toerana misy anao ihany. Ny mpitsidika hafa dia mitsidika fa ny fihetsiny dia arahana manerana an'i Etazonia sy Kanada. Raha atao teny hafa, dia misy mpitsidika efa an-tsokosoko 2, fa ny iray dia mpivezivezy ary ny iray tsia.
Ahoana no ahafahan'ny vokatrao, serivisinao, na ny hafatrao fotsiny aza ampifanarahana amin'ny mpandeha fa tsy mpitsangatsangana? Angamba mivarotra elektronika amin'ny tranokalanao ianao. Tokony hahita solosaina finday maivana sy kitapo ary fitaovana hafa ny mpandeha. Ny tsy mpitsangatsangana dia tokony hanana fampirantiana ireo solosaina an-tranonao sy orinasanao - angamba ny andianao fampisehoana lehibe.
Angamba ianao manana 'seho an-dàlana' izay hitsidihanao tanàna an-drenivohitra lehibe hampisehoana ny vokatrao. Ho an'ny tsy mpandeha dia tokony hamepetra ny antsipirian'ny fampisehoana làlana mankany amin'ny faritra misy azy ireo ianao. Ho an'ny mpandeha dia azonao atao ny manamboatra ny fampisehoana ny seho an-dalambe amin'ireo tanàna manodidina ny zotram-pizotran'ny olona.
Raha trano fisakafoanana ianao, angamba te hampiseho ny sasany amin'ireo rojom-pifaneraseranao amin'ny lalan'ny mpandeha miaraka amin'ny hafatra momba ny programa valisoa azonao amin'ny firenena rehetra. Ho an'ny tsy mpandeha dia hafatra avy amin'ny tompona na mpahandro na ny menio fanesorana vaovao anao.
Raha masoivohon'ny dokambarotra ianao, angamba tokony asehonao amin'ny tsy mpivahiny ny asan'ny mpanjifa eo an-toerana, ary ny kaontim-pirenena amin'ilay mpandeha.
Ny jeografia dia lafiny iray fotsiny amin'ny fampiasana Analytics. Raha fivarotana firavaka ianao dia azonao atao ny mampandoka ny varotra tsingerintaonao amin'ilay mpitsidika izay nividy ny fehin-tànana Anniversary 50 herinandro lasa izay. Raha banky ianao, angamba te hampiroborobo ny tahan'ny indram-bola indram-bolana alohan'ny andoavam-bola manaraka. Raha mpivarotra ianao dia azonao atao ny mampandoka ny sanda ara-barotra amin'ny fiara novidiko taminao.
Ny atiny dinamika dia efa somary ela tao amin'ny Indostrian'ny mailaka. Misy porofo marobe fa ny fanamboarana atiny ho an'ny fitondrantena mpitsidika dia manome valiny ambony lavitra. Fotoana nanombohan'ny orinasam-pampandrosoana tranonkala sy ny rafitra fitantanana ny atiny hifantoka amin'izany. Ny fampidirana ny Web Analytics amin'ny CMS anao dia hitondra valiny lehibe.
Mampalahelo fa ny fonosana maimaimpoana toa ny Google Analytics dia tsy manome an API na haavon'ny fampidirana ahafahanao mampiasa ny angona anatiny. Na izany aza, manao izany ny ankamaroan'ny orinasan-tserasera Analytics. Io fahasamihafana eo amin'ny endri-javatra io dia mety handany vola an'arivony dolara amin'ny orinasao - fa raha ampiasanao tsara izany dia ho tsara ny fiverenana amin'ny fampiasam-bola.
Tags: apple applemarketing amin'ny Bluetoothakaiky Bluetoothmarketing amin'ny akaiky an'i BluetoothEdgeRankahoana no refesina kloutmarketing eo akaikyUnsubscribe
May 15, 2008 ao amin'ny 3: 29 PM
Tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity aho dia niresaka tamin'ny orinasa antsoina hoe Xtract, any Failandy. Manokana amin'ny fikendrena fihetsika izy ireo ary farany indrindra, indrindra ho an'ny media sosialy. Hatramin'ny niresahako tamin'izy ireo dia nanomboka nijery orinasa mitovy amin'izany aho ary nahita fanombohana antsoina hoe Sometrics (Etazonia miorina). Ny antony iraisana dia ny fahaizana manome tambajotra sosialy vaovao momba ny mpanadihady. Io kosa dia mampitombo ny sandan'ny doka amin'ny fanaovana fampielezan-kevitra amin'ireo tranokala tambajotra sosialy antoko faha-3 ireo.
Ho fanampin'izay, nijery ireo zavatra azoko tamin'ny Google aho tao anatin'izay taona vitsy lasa izay sy ny fomba fananganana ny fanjakan'izy ireo. Voalazanao fa ny Google analytics dia tsy manolotra API amin'izao fotoana izao, saingy heveriko fa hanao izany izy ireo alohan'izay. Ho fanampin'izay, ny ohatra izay ampiasainao amin'ny fampiasana ny Jeografia rehefa mikendry dia azo alaina amin'ny dingana manaraka miaraka amin'ireo haitao misy an-tsarintany sy fizahana rehetra misy amin'izao fotoana izao eny an-tsena. Androany no nanoratako lahatsoratra momba ny Google sy Yahoo Maps.
Tombantombana fotsiny amin'ity dingana ity, fa ahoana kosa raha toa ny orinasa toa an'i Garmin hiditra amin'ny sehatry ny famakafakana sy marketing. Afaka nanolotra ny rafitra GPS izy ireo ary nanolo izany tamin'ny maodely tohanan'ny dokam-barotra. Mampiasà teknolojia misongona izay tsy manelingelina ny fampandehanan'ireo mpijery, hahazoana antoka fa tsy miova ny traikefan'ny mpampiasa, azo alefa ny doka izay napetraka ho an'ny mpivahiny tanteraka. Raiso an-dàlana iray hafa izany ary ampidiro ny ohatra amin'ny magazay firavaka ary manana doka amin'ny finday 3.0 ianao. Lasibatra, mpampiasa namana ary nahita fianarana amin'ny fanentanana fanentanana.
May 15, 2008 ao amin'ny 10: 26 PM
Ny 2 cents-ko fotsiny: maminavina ny Google Analytics API ao anatin'ny 6 volana ho avy aho.
May 16, 2008 amin'ny 6: 42 AM
Google dia mifantoka amin'ny API tokoa ka gaga aho fa mbola tsy nisy iray hatreto. Te-hahita ny 'triggers' an'ny Analytics aho .. amin'ny teny hafa .. ny fahaizana manao fangatahana ivelany. Mahafinaritra ny API, saingy mbola tsy afaka mihetsika amin'ny hetsika iray ianao mandra-pahatapitry ny.